Iomega diski ike Iweghachite: Olee otú naghachi faịlụ site Iomega Ike diski
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji naghachi faịlụ site Iomega Ike diski
Enwere m ike naghachi ehichapụ data si Iomega mpụga ike disk?
Site mmeghe m ehichapụ faịlụ site na m mpụga ike disk. Olee otú m nwere naghachi na data? Ọ bụ nnọọ dị mkpa faịlụ maka ọrụ m. M merụsịrị na mkpa nke ha! My disk bụ Iomega.
Data ehichapụ Iomega diski ike mgbe na-apụ egweri Bin na kọmputa gị, ma ọ pụtaghị na ọ na-arahụ ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe eziga "Hichapụ" iwu, na ị na-echeta ọdịnaya ka na-abaghị uru ma mee ka ọ apụghị ịhụ anya. Ka ọ dịgodị, na akụkụ nke Iomega diski ike ebe ehichapụ faịlụ ada n'elu mbụ na-akara dị ka oghere maka ọhụrụ faịlụ. Jirichaa ohere nke na-agbake faịlụ site na Iomega HDD, adịghị eji ya ọzọ site ugbu a. Adịghị azọpụta ọhụrụ faịlụ na ya, adịghị na-agụ faịlụ site na ya na adịghị ikwunye ya n'ime ihe ọ bụla na kọmputa. Dị tinye ya ruo mgbe ị na-ahụ ezi data mgbake ngwá ọrụ iji weghachite furu efu faịlụ.
Olee otú naghachi faịlụ site na Iomega ike disks
Ọ bụ na-nnọọ mkpa iji nweta a ịdabere data mgbake ngwá ọrụ. Unreliable otu onye nwere ike na-etinye gị furu efu data n'ihe ize ndụ nke na-ebibi ma na unrecoverable. Họrọ otu kpọrọ site n'aka ndị ọrụ weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị nwetara otu, dị wụnye ya na kọmputa gị. Bụrụ na ọ bụghị. ebe a bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, 100% pụrụ ịtụkwasị obi software. Ị nwere ike iji ha na-agbake dị iche iche data, gụnyere photos, videos, ọdịyo faịlụ, Office akwụkwọ, PDF, email, wdg, si gị Iomega diski ike, nakwa ọzọ di iche iche nke na diski ike dị ka Seagate, WD, Samsung na ndị ọzọ.
Ebe a, ka na-agbalị na Windows mbipute a Iomega HDD data mgbake software ọnụ.
Step2. Họrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka Iomega ike diski.
Step5. Preview na-agbake furu efu faịlụ na Iomega HDD.